“Waxaan Shaqadeydi Uga Tegay Madaxweyne Trump Dartii” Kornayl Vindman | Gaaroodi News
“Waxaan Shaqadeydi Uga Tegay Madaxweyne Trump Dartii” Kornayl Vindman
July 9, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Sarkaal sare oo ka shaqeynayay aqalka cad ee dalka Mareykanka, markii dambena laga eryay shaqadii uu ka hayay ayaa sheegay in sidoo kale uu iska casilay shaqada ciidanka Mareykanka oo uu ka tirsanaa.
Korneyl Alexander Vindman ayaa qareenkiisa waxaa uu sheegay in uu cagajugleyn, aargudasho iyo dhibaato uu kala kulmay madaxweyne Trump, kadib markii uu Vindman ku markhaati furay Trump xilligii ay socotay dacwadii la doonayay in xilka looga qaado.
Dhibaatooyin uu sheegay in uu la kulmay sarkaalkan ayuu horseeday in uu isaga tego shaqada ciidanka.
Korneylka ayaa walaac uu ka muujiyay wicitaankii taleefonka oo dhexmaray madaxweyne Trump iyo dhiggiisa Ukraine waxaa ay keentay in dacwad xil ka qaadis ah lagu qaado Donald Trump.
Haseyeeshee aqalka sare ee Mareykanka oo ay ku badan yihiin xisbiga Jamhuuriga ee Trump ayaa meesha ka saaray dacwaddii loo heystay.
Muxuu sheegay qareenka korneyl Vindman?
Waxaa uu ku marqaati furay Trump
War qoraal ah oo uu soo saaray qareenka kornaylka ayaa lagu sheegay in Vindman uu hawlgab noqday kadib 21 sano oo uu katirsanaa milateriga Mareykanka, waxaana sababta arrintan lagu sheegay inay tahay mustaqbalka sarkaalkan.
Qareenkiisa oo lagu magacaabo David Pressman ayaa sheegay in Vindman uu meel fagaara ah ka sheegay arrin ay dalbadeen aqalka kongreska, waxaana uu yiri “Vindman waxaa uu sameeyay wixii u faray sharciga, arrintaas darteedna waxaa dhibaateeyay madaxweynaha iyo dadka ku ag hareereysan”.
Mr Pressman ayaa intaa raaciyay in Vindman uu danta qarankiisa ka horumariyay tan shakhsiga, jaceyl uu u qabo dalkiisana uu ku waayay shaqadiisa”.
Vindman oo bartiisa Twiter-ka soo dhigay qoraal kooban ayaa xaqiijiyay in uu ka tegay shaqadii uu ka hayay milateriga Mareykanka, noolal cusubna ay u bilaabaneyso isaga iyo qoyskiisa.
Isniintii lasoo dhaafay, xildhibaan katirsan aqalka sare ee Mareykanka, horayna uga tirsanaa milateriga dalkaas ayaa sheegay in ilaa iyo hadda wasiirka difaaca ee Mareykanka aanu u xaqiijinin in aqalka cad uusan soo faragelin doonin dalacsiinta korneyl Vindman.
Haseyeeshee sarkaal sare oo katirsan ciidanka Mareykanka ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in wasiirka difaaca uu meelmariyay dalacsiinta Vindman isniintii lasoo dhaafay, liiska saraakiisha la dalacsiinayan loo diray aqalka cad.
Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo aqalka cad uu ka bixiyay arrintaas.
Maxay tahay sababta looga eryay shaqadii uu ka hayay aqalka cad? Kornayl Vindman
Mar uu kasoo hor-muuqday aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa Vindman waxaa uu sheegay in uu arkay arrin walaaceeda leh.
Wuxuu sheegay in uu maqlay wicitaan dhanka taleefonka oo dhexmaray Trump iyo madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky, kaas oo uu sheegay in uu ahaa mid aan wanaagsaneyn.
Markhaati furkaas ayaa keentay in Kongreska ay soo jeediyaan in xil ka qaadis lagu sameeyo Trump, arrintaas oo ay markii dambe ku gacan seyreen senetka.
Xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ayaa ku andacooday in madaxweyne Trump uu ka tallaabsaday sharciga Mareykanka, waxayna ku eedeeyeen in uu ku badeshay dano siyaasadeed oo u gaar ah.
Madaxweyne Donald Trump ayaa xilligaa sheegay in uusan garaneynin, wax kulan ahna uusan dhexmarin isaga iyo vindman